Voaolana? Raiso Ny Vola, Dia Mangina! Hoy Ny Polisy Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2013 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, srpski, Italiano, македонски, English
Nanome vola mangingina 38 dolara ho an'ny rain'ilay zazavavy 5 taona lasibatry ny fanolanana sy fakàna an-keriny ny polisy ao andrenivohitra Delhi mba hanadinoina ity herisetra mahery vaika ity, niteraka fahatezerana manerana ny firenena izay miady amin'ny fitomboan'ny tranga fanolanana izany.
Niharan'ny fanolanana narahina herisetra ity ankizivavy 5 taona ity nandritra ny efatra andro tao amin'ny kianja Gandhi Nagar ao Delhi, voalaza fa ny mpifanolo-bodirindrina aminy ihany no nahavita izany habibiana izany. Tsy hita ity zazavavy ity nanomboka tamin'ny 14 Aprily, ary tra-tehaka ihany ny zava-nitranga taminy tamin'ny 19 Aprily 2013.
Araka ny filazan'ny tati-baovao amin'ny fiteny ao an-toerana, nikaroka ity zazavavy ity nandritra ny iray andro manontolo ny fianakaviany sy ny manodidina azy, ary fantatra fa mody niara-nikaroka tamin'izy ireo ihany koa ilay mpifanolo-bodirindrina voalaza fa nanolana azy. Tsy hita mihitsy anefa ilay zazavavy nandritra izany andro izany, ka nanao filazana zaza very tany amin'ny polisy ao an-toerana avy eo ny fianakaviana tamin'ny 15 Aprily 2013.
Efatra andro taty aoriana, raha mbola nitohy ny fikarohana, nandre feo avy ao amin'ny efitra ambany ny rain'ilay zazavavy. Avy eo, nantsoina ny polisy ary nopitsihana ny hidim-baravarana. Hita tao ilay zazavavy ary nampahonena tanteraka ny nahita azy, ilay nahavanon-doza kosa efa tafatsoaka.
Mpisolovavao ao Delhi manao fihetsiketseham-pitakiana ny rariny ho an'ilay mpianatra 23 taona naolan'ireo jiolahimboto tao New Delhi. Sary avy amin'i Louis Dowse. Copyright Demotix (3/1/2013)
Mampivarahontsana ny antsipirihan'ity tranga fanolanana ity, tahaka ilay tranga fanolanana tao Delhi niseho tamin'ny volana Desambra 2012 (jereo ny tatitra ao amin'ny global Voices [mg]). Nanamafy ny soritsoritra nataon'ny mpitsabo fa niharan'ny fanolanana feno herisetra ilay zazavavy – nahitana tavoahangy menaka plastika sy labozia tao amin'ny vavonin'ilay zazavavy.
Na dia izany aza, tsy nijanona hatreo ny olan'ny fianakavian'ity zazavavy ity – narahin'ny fahalemen'ny polisy sy ny governemanta izany.
Voalaza fa diso fanantenana tanteraka ny rain'ilay zazavavy tamin'ny nametraka fitoriana, satria nomena vola Rs 2000 (38 dolara eo) mba tsy hitantara na hanaparitaka izany.
Nampisafoaka ny maro ny loza diso tafahoatra sy ny fihetsiky ny polisy sy ny governemanta.
Shuddhabrata Sengupta avy ao Kafila naneho ny fahatezerany:
Voatery tokony hametra-pialàna ve ny kaomisarian'ny polisy ao Delhi, noho ny tsy fahombiazany tamin'ny fiadiana ny fanolanana sy ny tsy filazany tamin'ny olom-pirenena ny zava-nitranga izay efa fanao mibaribary amin'ny andraikitra tontosain'ny biraon'ny polisy?
Afaka raisintsika ho lainga feno fanevatevana ve ity fanao mahazatra isan'andro ity? Mandrapa-rahoviana no hitohizan'izao?
Tamin'ny 19 Aprily, Vishal Dadlani (@V1SH4L), mpiangaly mozika avy ao India nisioka hoe:
@V1SH4L: Fa dia inona loatra ity mitranga ao India ity? Manolotra vola tsolotra ho an'ny ray aman-drenin'ilay zazavavy voaolana ankehitriny ny polisy!? Tokony hahanton-doha ireo polisy ireo!
Pritish Nandy (?@PritishNandy), mpanao gazety avy ao India naneho hevitra mikasika ny kolikoly fanaon'ireo mpitandro ny filaminana Indiana ary nampatsiahy ity:
@PritishNandy: Tsarovy ny fiteny malazan'ny Fitsarana Mulla: Tsy misy ny hery meloka eto India azo ampitahaina amin'ireo heloka vitan'ny mpitandro ny filaminana Indiana.
Tamin'ny siokany hafa, nampahatsiahy momba ny fihetsika malaina, kamo eo amin'ny fitantanan-draharaha ao India izy:
@PritishNandy: Nilaza ny Filohan'ny Vaomiera Nasionaly ho an'ny Vehivavy, Mamta Sharma fa rahampitso izy vao handeha hitsidika ilay zazavavy satria mbola andro tsy fiasana androany.
Naneho fijery somary mahatezitra mikasika ity tranga ity ilay mpisera Twitter monina ao Delhi (@cyclingsultan) izay namariparitra ny tenany ho ‘Mpitsipaka ny Miozolomana, Sapiosexual, Mpitondra bisikileta sy mpiliba’:
@cyclingsultan: Hoy ny polisin'i Delhi tamin'ny fianakavian'ilay lasibatry ny fanolanana: ‘Nilaza taminay izy ireo fa tokony ho faly izahay satria efa hita ilay zazavavy & mivavaha mba ho sitrana izy’.
Rituparna Chatterjee (@MasalaBai), tonian-dahatsoratra, sanganehana manoloana ity fihetsika ity:
@MasalaBai: Iza no handehananao raha milaza ny polisinao hoe “mahaiza mankasitraka fa efa hita sady mbola velona izy (ilay zazavavy voaolana)'? Iza no hitadiavanao vonjy amin'ny maha olom-pirenena tsy manan-kery anao?
Fanampin'ny fanevatevana amin'ny ompa, notsaboina tao amin'ny hopitaly monisipaly tsy ampy fitaovana ilay zazavavy ary nafindra taminà hopitaly tsaratsara kokoa taorian'ireo fihetsiketsehana sy ny fanerem-bahoaka. Voalaza fa ratsy dia ratsy ny fahasalaman'ilay zazavavy 5 taona.
Nampiseho ny fahavinirany ireo vehivavy manoloana ny zava-nihatra mahatsiravina natao tamin'ny vatan'ilay zazavavy.
@Lucifer_sam666: Vonoy izany olona tsy vanona izany, karazan'olona adala tahaka ny inona no mahavita manitrika tavoahangy 200 ML ao anatin'ny vatana zazavavy 5 taona, latsaka ny ranomasoko.
Nandritra izany, Arunoday Mukharji (@ArunodayM) [hi], mpanao gazety avy ao India, nizara tahiry somary mampivarahontsana momba ny fiakaran'ny tranga fanolanana ao India:
@ArunodayM: Delhi 2011: tranga fanolanana 572. Tamin'ny taona 2012: nitombo ho 706 izany ary niakatra 727 ny tranga herisetra ara-nofo. Mampiahiahy ny antontan'isa amin'ny faran'ny taona 2013 #Delhirape
Kisendrasendra, momba ny loza tranga fanolanana ao Delhi, nanisy fanovana tamin'ny lalàna momba ny fanolanana ny governemanta Indiana, ary nasolo lalàna somary henjakenjana izany.
Nandray izany ho zava-dehibe ny mpisera Twitter Indiana Kapil (@kapsology) ka nanoratra hoe:
@kapsology: Inona no antony ilàna lalàna manohitra ny fanolanana raha mahamenatra sy tsy mendrika tahaka izao ny fitondratenan'ny polisy
Hita tao amin'ny media sosialy any ivelany ihany koa ny fahatezerana manohitra ireo polisy Indiana sy ny governemanta hatramin'ny nahafantarana ny fisian'ny voina.